OoBuhle obuBalaseleyo buBukeka buBala siSasaza kwi-Instagram Kwiveki ephelileyo
Kule veki iphelileyo yobuhle be-Instagrams sasikhe sayikhupha kwisikrini sethu
Februwari 24, 2020
I-Icon kunye ne-Idol: UNahomi Campbell Udliwanondlebe Adut Akech we-iD
TKwiveki yakhe ephelileyo ku-Instagram, ubuhle obujike bube mnyama buye busijonge kwizikrini ixesha elide kunokuba buhle kodwa ayisiyiyo into eyenzekayo xa ubona umntu okanye into ethile kwaye luthando lokuqala ukumbona?
Usomashishini wefashoni waseNigeria Tania Omotayo yenye yeembonakalo esazithanda ngokupheleleyo. Uye wayisikelela igrama kule veki iphelileyo ngokujonga i-minimalist ephefumlelwe iorenji kodwa yayilulusu lwakhe olunobukhazikhazi esasinokusikhwaza iinjongo zesikhumba! Ukuthetha malunga nokukhazimula kwe-minimalist glam, i-Nollywood actress kunye ne-budding ye-DJ yabasetyhini UDorcas Shola Fapson, eyaziwa ngokuba nguNks DSF, wabelane ngembonakalo yobuhle ngokupheleleyo eyebhodini. Umdlali weqonga wabelane ngokujonga emva kokuba iindaba zigqithile kwimpelaveki malunga nengxabano eyenzeka phakathi kwakhe nomhlobo USophia Egbueje.
Umlingisi waseMelika Yara Shahidi Izinto zigcinwe zingenanto kunye nehippie ngokunxiba ngokuswayipha kwe-eyeliner edityaniswe nge i-ponytail ephezulu yeenwele. Iinwele zomntwana ezibalaseleyo kunye nolusu lwaye olungenasiphako lwenze ukuba inkangeleko iphela ikhange ngakumbi. Umdlali weqonga UMarsai Martin uye kwi “Umbutho weSizwe woPhuculo lwabantu abaBala” Amabhaso ngeempelaveki akhangeleka njengento emdaka. Uphume kwisithunzi esimeyimdaka ngebala elinombala omfusa kunye nemilebe emnyama engacacanga ngeenwele zakhe zibekwe mva. Yonke imbonakalo yayitsha nje kwaye ilungele ubudala kangangokuba asinakuzinceda ekuthandeni!
Sinciphise ngononophelo imbonakalo yobuhle ebisisongele isikrini sethu kule veki iphelileyo, kwaye njengesiqhelo, kukho ukujonga ukukhuthaza wonke umntu wasetyhini ngalo lonke ixesha.
Jonga ubuhle obuhle ukusuka kwiveki ephelileyo…
Ubelapha apha before
Iposi elibiwe Ebonee Davis (@eboneedavis) kwi Feb 18, 2020 kwi-2: 22pm PST
Ubomi bulungile xa i-chin yakho ephindwe kabini iphantse ibe yodwa 1 😬 Ukonwabele usuku lwam losuku e @dabota_cosmetics. Ndiyayithanda le make up kujongeke kakhulu! Oku kujongwa kufezekisiwe kusetyenziswa iimveliso zabo kuphela.
Iposi elibiwe TT (@taniaomotayo) kwi Feb 20, 2020 kwi-4: 33am PST
Ngubani uBoss? Ewe, ndiyathemba ukuba ndiwuphendule umbuzo the Makeup: @zainabazeez 🥰😍engubo: @julyetpeters cletus_bishop 🙌🏾 ❤️❤️❤️❤️❤️ #WhosTheBossFilm #WhostheBossPremiere.
Iposi elibiwe Jemima Osunde (@jemimaosunde) kwi Feb 17, 2020 kwi-9: 46am PST
@ riccardotisci17 @burberry
Iposi elibiwe CanJamaican Canadian♔ (@winnieharlow) kwi Feb 19, 2020 kwi-4: 24pm PST
Ukugqibela ukujonga ❤️❤️❤️
Iposi elibiwe I-Flawlessfacesbyjane (@flawlessfacesbyjane) kwi Feb 20, 2020 kwi-3: 48am PST
UJhene Aiko Chilombo
"IChilombo" nge-6 kaMatshi 🌋
Iposi elibiwe Jhené Aiko Efuru Chilombo 🌋 (@jheneaiko) Feb 21, 2020 kwi-6: 00pm PST
UDorcas Shola Fapson
Iposi elibiwe UDorcas Shola Fapson #DSF 🎀 (@ms_dsf) Feb 20, 2020 kwi-9: 53pm PST
Iposi elibiwe Yara (يارا) Shahidi (@yarashahidi) kwi Feb 19, 2020 kwi-5: 41am PST
vula isipaji sakho
Iposi elibiwe UJackie Aina (@jackieaina) kwi Feb 17, 2020 kwi-3: 23pm PST
Iposi elibiwe UMarsai Martin (@ marsaimartin) Feb 23, 2020 kwi-9: 35am PST
Iposi elibiwe UTemi Otedola (@jtof fes) kwi Feb 19, 2020 kwi-9: 47am PST
Ifoto yetyala: I-Instagram | NjengokuThunyelwe -Ubonakala buhle bumnyama
Ukusuka kwiindaba zokuhanjiswa kwesaziwayo ukuya kwimveliso ekhutshwa ziimpawu zehlabathi, ezase-Afrika nezaseNigeria, funda ngakumbi amabali eendaba amatsha kunye nobuhle ngokundwendwela isitayilerave.com/category/be)/.
UAduke Shitta buhle instagram ubuhle bujongeka UDorcas Shola Dapson Ebonee Davis Ulusu olungenasiphako ulusu oluqaqambileyo jackie uhlobo Jemima Osunderu UJhene Aiko Chilombo iinto zokuzilungisa UMarsai Martin Tania Omotayo UTemi Otedola UWinnie Harlow Yara Shahidi
Uhlobo Rave Februwari 24, 2020
I-Rave News Digest: I-Harvey Weinstein yafumana uHlahlo, usapho lukaKazeem 'Kaka' Tiamiyu Thetha phandle, IHazard + Ngakumbi
Izitayile zeBunided zePonytail zibukhali, ziyabhabha kwaye zihlobo ngokufanelekileyo! Jonga i-18 Jonga + iingcebiso ngokuKhonkotha
Ayinamsebenzi kwaye iyakhuthaza! Iicaphulelo zobuhle ezingama-20 ngabafazi abaNtsundu
Ukuvutha ngaphakathi Jonga! Iindlela ezi-15 ezinkulu zobuhle zeHlobo ngeHlobo lowama-2020